असार महिनाका चर्चितहरु | www.itaharifm.com.np
गृहपृष्ठ » चर्चाका चार » असार महिनाका चर्चितहरु
असार महिनाका चर्चितहरु
Posted by Itahari Fm | error | २११ पटक
उपमहानगरको असारे बजेट सभाले साउन महिनामा थप चर्चा पायो । बजेट निकै विवादमा पर्यो । पारित गर्न तनाव पनि सृजना भयो । हुन त संख्यात्मक हिसाबले सार्बजनिक बजेट नगर सभाबाट पारित गराउन कुनै समस्या थिएन् । तर मेयर उपमेयरको आन्तरिक टकराव समस्याको जड बन्यो । मेयर उपमेयर एक अर्काले ल्याएको बजेट काट्ने सम्मका कार्य भए । कम बजेट भएको भन्दै काँग्रेसले नगर सभा रोक्न खोज्यो तर सकेन । काँग्रेसको विरोधकै वापजुत बजेट पारित भयो ।
इटहरीमा चोरीका घटना बढेका बढै भए । चोर पकड्न प्रहरी असफल झै देखियो तर इटहरी प्रहरीले चोरी घट्यो भन्न छाडेन । चोरीका कारण इटहरी प्रहरी माथी प्रश्न उठ्न थाले पछि संघिय प्रहरी कार्यलयले विशेष अप्रेशन थालेको हल्ला बजारमा छायो । प्रहरीले कुकुर सहितको अभियान सुरु गरेको पनि बजारमा चर्चा भए । यता, इटहरीमा आयोजना गर्न लागिएको सुन्दरी प्रतियोगिताले पनि राम्रै चर्चा पायो । तर सकारात्मक भन्दा नकरात्मक चर्चा । सुन्दरी प्रतियोगितामा यौन दुव्र्यहारको कुरा बाहिर आयो । सवै शसंकित भए । लेडि जेसिज नै सहआयोजक भएको कार्यक्रममा बाहिरबाट आएको एक व्यक्तिले युवतिमाथीको यौन दुव्र्यवहार गरेको घटनाले सवैलाई अचम्मीत र शसंकित बनायो ।
यी र यस्तै विषयहरुले बजारमा चर्चा पाए । यी चर्चाहरुसँग जोडिएर बढि चर्चामा आउने व्यक्तिहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
लेडि जेसिज इटहरीकी अध्यक्ष हुन, मिनु न्यौपाने । उनी शिक्षक पनि हुन् । यो महिना उनी चर्चामा आईन् । मिस सुनसरी प्रतियोगिताले उनलाई चर्चामा ल्याईदियो । मिस सुनसरी प्रतियोगिताको सुरुवातसँगै विवाद पनि सुरु भयो । प्रमुख आयोजक रहेको पल इन्टरटेनमेन्टका प्रमुख पल भनिने अमित पौडेलले यौन दुव्र्यवहार गरेको सहभागी युवतिहरुले आरोप लगाए । पौडलले युवतिहरुलाई जवरजस्त एक्सपोज गर्ने बाहनामा यौन दुव्र्यहार गरेको कुरा खुल्न आयो । सौन्दर्य प्रतियोगितासँगै जोडिएर आउने गसिफ आरोप त्यतिबेला गम्भिर विषय बन्यो जब कि प्रतियोगिताको सहआयोजक महिलाहरुको समुह लेडि जेसिज भन्ने भयो । महिलाहरुको समुहले युवतिहरुका लागि आयोजित कार्यक्रममा यौन दुव्र्यहार कसरी सम्भव छ ? यो गम्भिर प्रश्न हो । यहि प्रश्नले लेडि अध्यक्ष रहेकी मिनु न्यौपाने बजारमा चर्चामा आईन् । बजारमा विभिन्न थरीका समाचार तथा चर्चाहरु सुनिए । यौन दुव्र्यहारको बचाउ गरेको भन्दै सञ्चार माध्यमहरु लेडि जेसिज र त्यसका अध्यक्षमा केन्द्रीत भए । के साँच्चै बाहिर आए जस्तो दुव्र्यवहार भएको हो ? वा यो कुनै गसिफ थियो ? आयोजक, प्रतियोगी, वा कुनै स्वार्थ समुहको ? त्यसको तथ्य हाल सम्म उजागर हुन सकेको छैन ।तर कार्यक्रम स्थगित भयो ।
पल इन्टरटेनमेन्ट के हो? र पल भनिने अमित पौडेल को हुन ? महिला सहआयोजक रहेको कार्याक्रममा यौन दुव्र्यवहार गर्ने हिम्मत उनीसँग कहाँबाट आयो ? त्यसको विस्तृत खोजी नभएको पनि बजारमा चर्चा हुने गरेको छ । एक टेलिभिजनकर्मी, एक प्रतियोगी युवतिले मिस सुनसरीको ताजको बार्गेनिगंमा कुरा नमिलेपछि विवाद सुरु भएको भन्ने चर्चा विहान बेलुकाको चिया चौतारीमा सुनियो । एक सहकारीको सञ्चालक हुँदा ताकाको आर्थिक कारोबार विवादको इगो विवाद सृजना गर्ने भित्री कारक हो भन्ने चर्चा पनि बजारमा सुनियो । दुई समुहमा विभाजित इटहरीका महिला समुहको इगो विवादले पनि राम्रैसँग काम गरेको ती समुहका कतिपय महिलाले नै बोल्ने गरेका छन् ।
आगोमा ध्यू कस कसले थपे त्यो सहायक विषय हो । तर महिला नै आयोजक रहेको कार्यक्रममा महिला नै असुरक्षित हुने वातावरण गम्भिर विषय हो । यसको वास्तविक कुरा बाहिर ल्याउनुपर्ने बजारमा तिव्र माग छ ।
रेवति भण्डारी परिचित नाम हो । कानुनी विषयका जानकार भण्डारीको भुमिका अघिल्लो संसद भवनमा पनि राम्रैसँग देखि सकिएको छ । आफ्नै पार्टिका नेताले खुट्टा तानेर लडाए पछि भण्डारी अहिले केही गुमनाम भैmँ छन् । तर कहिले काही कानुनी विषयका गाँठा फुकाउन उनी रेडियो र पत्रिकाकामा साक्षी बनेर आउँछन् । पछिल्लो समय भण्डारी इटहरीमा पर्दा पछाडिको खेलाडीको रुपमा काम गरिरहको चर्चा चल्ने गरेको छ । विशेष गरी उनको प्रभाव इटहरी उपमहानगरपालिकामा राम्रैसँग देखिन थालेको छ ।उपमहानगरकाका कानुन निर्माण गर्ने देखी लिएर कानुनको व्याख्या गर्दै त्यस मार्फत उपमहानगरमा प्रभाव देखाउन उनी भित्री रुपमा काम गरिरहेको चर्चा छ । हुन त इटहरी उपमहानगरपालिकामा कानुन निर्माण गर्न मेयर उपमेयर सहित निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । नगर सभामा कानुन निर्माणका लागि विद्ययकहरु पेश हुन्छन्, तिनीहरुको छलफल पनि भएको देखिन्छ । स्वयंम जनप्रतिनिधिहरु आफु सक्रिय रुपमा छलफल गरेको महसुस गर्छन् । तर त्यो उनको भ्रम मात्र हो भन्ने चर्चाहरु अहिले भित्री रुपमा कतिपय सर्वाजनिक कार्यक्रमका भेटघाटमा हुने गरेको छ ।
कानुन निर्माणमा विशेष गरी उपप्रमुखले विद्ययेक पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्ययेक पेश हुन्छ, छलफल हुन्छ अनि पास । वडाअध्यक्षहरु अचम्म, उपमेयर खुसीले मख्ख अनि भण्डारी पर्दा पछाडि दंग हुन्छन् भन्ने चर्चा अहिले उपमहानगरपालिका भित्रै हुने गरेको छ ।
उपमेयर कानुनको त्यत्रो जानकार होइनन् । तर उनले ल्याएका विद्ययेकहरु किन खासै संसोधन गर्नुपर्ने माग उठ्दैनन् । कतिपय जानकार वडाअध्यक्षहरु विद्ययेकका दफा दफा केलाउँछन् तर कुनै ठुलो समस्या नभेटेपछि यो कुनै ठुलै कानुनी वकिलले बनाएको भन्दै ओझेल पर्छन् । आखिर हो पनि त्यस्तै संसद भवनमा मस्यौदा समिती सदस्यले बनाएको विद्ययेकमा समस्या कमै होलान् ।
भण्डारीले उपमेयरलाई कानुन बनाउन भित्री रुपमा सहयोग गरिरहेको बजारमा चर्चा हुने गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बजेट भाषणमा पनि देखियो ।उपमेयरले बजेट तयार गर्नुभयो । सभामा पेश गर्ने बेलामा मेयरसँग लफडा भयो । उपमेयरको बजेट मेयरले काटी दिए ।मेयरलाई वाईपास गरेको भन्दै मेयरले हलो अड्काए । अन्तिम समयमा आएर अर्कै बजेट बनाएर सार्वजनिक भयो । तर जुन सार्वजनिक भयो त्यो पनि थप परिर्माजन पछि मात्र पारित भयो ।
उपमहानगरमा उपमेयरको कानुन निर्माण गरेको दम्भ अनि भण्डारीको भित्री भुमिकाको चर्चा हुने गरेको छ ।
इटहरी वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष हुन चन्द्र भट्टराई । उनी इटहरीको एक मात्र पब्लीक क्याम्पस जनता क्याम्पसको सञ्चालक समितिको सदस्य पनि छन् । वडा अध्यक्षको कामले केही सकारात्मक चर्चा पाएका भट्टराइ क्याम्पस सञ्चालकको भुमिकामा यो पटक अत्यन्तै आलोचित भएका छन् । इटहरीको मुटुमै पर्ने ४ नम्बर वडामा उनी निर्वाचित भएर आएपछि केही राम्रा र उत्कृष्ठ कार्यहरु भएका छन् । वडा अध्यक्षको कामको मुल्यांकन गर्दा उनी उत्कृष्ठ नै मानिन्छन् । आँखाको कमजोरीका कारण सहयोगीको भरमा यो किसीमको कार्य सम्पादनलाई उत्कृष्ट मान्नु पर्छ र प्रसंशा पनि गर्नु पर्छ । उनी सहयोगीकै सहयोगमा वडाका टोलटोलमा पुग्छन्, जनताका पिरमर्का,गुनासो सुन्छन् । हुने काम तत्काल पुरा पनि गरिदिन्छन् । उनलाई इटहरीका निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्येका सृजनशिल वडा अध्यक्ष पनि भन्ने गरिएको छ । उनकै पलमा फोहोर र दुर्घन्धित टेंग्राखोला सफाई गरी बोटिगंको परिक्षण पनि गरियो । आर्थिक लगानी गर्न सके बोटिगंको पनि सम्भावना छ भन्ने कुराको खोजी गरे । टेंग्राखोलाको समस्या समाधान गर्न टेगं्रा करिडोरको योजना पनि ल्याएका छन् । खोलाकिनारमा रुख रोप्ने र बाटो बनाउने काम पनि सुरु गरेका छन् । तर चन्द्र भट्टराई जनता क्याम्पसको संचालक समितिको सदस्यका रुपमा भने आलोचित भए । उनी जनता क्याम्पसको पदपुर्ती समितीको संयोजक थिए । उनले एक जना कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी बिज्ञापन खुलाए र जर्बजस्ती आफ्नै छोरीलाइ नियुक्ती गराए । आफै छनौट समितीको संयोजक भएर प्रतिष्पर्धामा अगाडी आएकालाई हटाएर आफ्नै छोरीलाई नियुक्ति गराए पछि भट्टराईले गरेका राम्रा कामलाई छायाँमा पारिदियो ।
इटहरीका युवा नेता हुन,विकास केसी । बेलाबेलामा उनी पनि चर्चामा आईरहने व्यक्ति हुन् । यो महिना पनि उनी चर्चामा आए । जनता क्याम्पस सञ्चालक समितिको सदस्य रहेका उनी पदपुर्ती समितिमा सदस्य थिए । आफै छनौट समितिमा बसेर उनले पनि आफ्नै श्रीमतिलाई जागीर खुवाए । त्यो पनि जर्बजस्ती । एक जनाको बिज्ञापन खुलेको ठाँउमा दुई जना नियुक्ति गराए । आफ्नै श्रीमतिलाई जागिर लगाउन दवाव दिएको विवादमा मुछिएर विकास चर्चामा आए । विकास, जनता क्याम्पसमा नेविसंघको राजनिति गर्दै स्ववियुको उपसभापति पनि भईसकेका व्यक्ति हुन । अहिले उनी क्याम्पसमा सञ्चालक समिती सदस्य छन् । सञ्चालक समिती सदस्यको मर्यादालाई विर्सिएर विकासले क्याम्पसको पुस्तकालय सहायकमा आफ्नै श्रीमतिलाई नियुक्त गर्न दवाव दिए । विकासको शक्ति त्यतिबेला टक्कर खायो, जब छनौट समितीका संयोजक रहेका चन्द्र भट्टराईले आफ्नै छोरीलाई नियुक्त गर्ने अड्डी कसे । वडा ४ का अध्यक्ष रहेका चन्द्र भट्टराई आफै छनौट समितीको संयोजक भएको विर्सीएर छोरीलाई जसरी भएपनि नियुक्त गर्न लागिपरे । दुई नेताको शक्तिमा जनता क्याम्पस प्रशासन र सञ्चालक समिती अध्यक्ष निरिह सावित भए । उनीहरुको कुनै दम चलेन,नियुक्ती विषयमा । ठुला साँडेको जुधाईमा साना बाछाहरुको मिचाई कसरी हुन्छ भन्ने उदाहरण बन्यो जनता क्याम्पसको नियुक्ति विवाद । उत्कृष्ठ प्रतिस्पर्धी दुई नेताको चेपुवामा परे । दुई नेताले आफ्नो शक्ति लगाए । दुवै गल्ने संकेत नदेखे पछि दुवै मिलेर खाने भन्दै एकले श्रीमती र अर्काले छोरीलाई जागिरमा लगाए । एक पदमा दुई नियुक्ती, कहीँ नभएको जात्रा जनता क्याम्पसमा भन्ने चर्चा अहिले बजारमा चलेको छ ।।